के ज्योतिषीहरू भविष्यको भविष्यवाणी गर्छन्? - ज्योतिष
के ज्योतिषीहरू भविष्यको भविष्यवाणी गर्छन्?
प्रश्नहरू र उत्तम उत्तरहरू - ज्योतिष भविष्यवाणी
ज्योतिषखगोलशास्त्रीय निकायले तिनीहरूको जन्म मितिमा निर्भर गर्दै आधारभूत मौसम ढाँचा भन्दा परेको व्यक्तिको जीवनमा प्रभाव पार्दछ भन्ने योजनाहरू। यो दावी वैज्ञानिक रुपमा गलत छ। प्रकृतिमा प्रकाशित गरे जस्तै, उनले फेला पारे किज्योतिषीहरूसक्छगर्नुहोस्कुनै राम्रो छैनभविष्यवाणीकोभविष्यअनियमित मौका भन्दा।२। २०१।।
आचार्य श्री, ज्योतिष मा तपाइँको टिप्पणीहरु के छन्? ज्योतिष भारतीय संस्कृति मा लंगर छ। तिनीहरूको फरक नाम छ। तिनीहरू भन्छन्, 'मेरो कुंडलीले के भन्छ?'।
उनीहरू सोच्छन् कि यो वैदिक ज्योतिष हो। वैदिक भनेको कति पुरानो हो। यो एक चार्ट हो।
यसमा १२ वटा घरहरू छन्। र त्यहाँ १२ वटा घरमा विभिन्न प्रकारका नक्षत्रहरू छन्। र ग्राहास।
ग्रहहरू जसरी हामी उनीहरूलाई कल गर्दछौं। वास्तवमा त्यहाँ धेरै ग्रहहरू छन् जुन चल्दै, घुमाउँदै छन्, त्यसैले हामी तिनीहरूलाई हेर्छौं र ती प्रभावकारी छन् किनकि तिनीहरू ठूला आकारमा छन्। तपाईं पृथ्वी भन्दा ठूलो हुनुहुन्छ।
वा मंगल ग्रह भन्दा ठूलो। बृहस्पति भन्दा कहिलेकाँही ठूलो।
तर हाम्रो सौर्यमण्डलमा मात्र मलाई लाग्छ कि बृहस्पतिलाई धेरै ठूलो मानिन्छ। त्यसोभए त्यहाँ नौ मुख्य ग्रहहरू छन्। त्यसैले ज्योतिष एक विश्वास छ कि यदि तपाईं एक निश्चित समय मा जन्मनुभएको हो र यी सबै ग्रहहरु तपाइँको शरीर लाई प्रभावित छन् को लागी गरीएको छ यदि उनीहरुको प्रभाव शरीर मा पहिले नै छन्।
मानौं बृहस्पति ...
तपाईं जन्मँदा बृहस्पति तपाईंको नजिक थियो। वा मंगल तिम्रो नजिक थियो। त्यसोभए तपाईंको शरीरमा यो प्रभाव छ।
त्यो विश्वास हो र यो हजारौं हजारौं को लागी भएको छ। र जहिले पनि यी ग्रहहरू निश्चित कोणमा घुमाउँछन् वा केही कोणहरूमा सर्दछन् जसले गर्दा यस्तो अवस्था सिर्जना हुन्छ, यो समृद्धि हुन सक्छ निश्चित देश वा क्षेत्र दक्षिण वा उत्तर वा पूर्वको लागि हुन्छ।
वा एक निश्चित प्रकारको व्यक्ति। यही नै हामी तिनीहरूलाई कल गर्छौं, 'ओह, यो व्यक्ति ताराहरूसँग धेरै खुशीको साथ जन्मेको छ'।
वा एक व्यक्ति भाग्य बाट बाहिर छ, त्यो व्यक्ति खराब ताराको साथ जन्म भएको छ। यो ज्योतिष हो। ज्योतिष ज्योतिषीद्वारा निर्धारित गरिन्छ, त्यस्तै घटना हजारौं बर्षमा भएको छ जब यो निश्चित कोण वा केही सर्कलहरूमा परिणत हुन्छ जुन उनीहरूले निर्धारण गर्छन् कि यो हुनेछ।
तर त्यो केसको आवश्यक छैन। यो केवल तिनीहरूको विश्वास हो। हिन्दू संस्कृतिमा जस्तै, रामालाई ताज दिइन्छ भनिन्छ।
उनी अयोध्याका एक राजा हुन् भनिएको छ। तर सोही दिन उनी राजा हुनुको सट्टा निर्वासनमा परेका थिए। र उनका कुला गुरु - ज्योतिषी भन्छन् - धेरै राम्ररी परिचित थिए।
र उसले ताजको समय सेट गरे। तर उसलाई अर्को तर्फबाट हटाइयो। त्यसोभए ऊ ज्योतिषले काम गर्न आवश्यक थिएन।
तर मलाई तपाईलाई भन्न दिनुहोस् किनभने मानिससँग ज्योतिषविद्या बारे गलत धारणा छ। वास्तवमा, ज्योतिष भनेको यो हो कि त्यहाँ धेरै ताराहरू वा ग्रहहरू छन् जसले तपाईंलाई असर गर्दछ। हो, उर्जाले हामीलाई असर गर्छ किनकि बृहस्पति हामीबाट टाढा भए पनि बृहस्पतिको उर्जाले अझै हामीलाई असर गरिरहेको छ वा मंगल ग्रहले अझै हामीलाई असर गरिरहेको छ किनकि हामी पृथ्वी भन्दा ठूला ग्रहहरूको कुरा गरिरहेका छौं।
चन्द्रमा सबैभन्दा नजिक छ। त्यसैले चन्द्रमाले बढी असर गर्छ। हाम्रो भावनाहरु।
जब यो शुक्र हो, शुक्र हाम्रो वरिपरि पनि छ, त्यसैले यसले अधिक असर गर्दछ। व्यक्ति भावनात्मक हुन्छन् र उनीहरू धेरै जीवित हुन्छन् र जब तेरो जन्मेको भिनस तपाईंको नजिक आउँछन् भने ती उज्यालो हुन्छन्। वा जब यो फर्कन्छ र तपाईंमा आउँदछ।
किनभने हामी प्रत्येक ग्रहको गति जान्दछौं, किनकि ती स्पिन छन्। त्यो गणितिय जो कोहीले यसलाई गणना गर्न सक्दछ। र अब कम्प्युटर बस गणना गर्दछ।
यो तपाईले आफ्नो कुंडली बनाउन सक्नुहुनेछ र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कि शुक्र कहाँ छ, जहाँ बृहस्पति छ, म कती प्रभावित छु। तिनीहरूबाट प्रभावित भनेको उनीहरूको उर्जाबाट प्रभावित हुनु हो। यसको मतलब यो हो।
यदि तपाईं शनिले प्रभावित हुनुहुन्छ भने शनिले तपाईंलाई सामान्यतया गलत बाटोमा डो .्याइरहेको हुन्छ। तर यदि तपाईं बुधद्वारा प्रभावित हुनुहुन्छ, यसले तपाईंलाई व्यवसायमा लैजान्छ। यदि तपाईं बृहस्पतिबाट प्रभावित हुनुहुन्छ भने तपाईंले धेरै उच्च शिक्षा पाउनुहुनेछ।
त्यसैले उनीहरूको भिन्नै अर्थ र फरक परिणामहरू छन्। तर मँ तपाईंलाई सरल तरिका बताउँछु: किनकि तपाईंको उर्जाले तपाईंलाई प्रभाव पार्दछ, मानौं मानौं तपाईं स्कूल जाँदै हुनुहुन्छ र तपाईं धेरै मेहनत गर्दै हुनुहुन्छ, जान्नको लागि कडा मेहनत गर्नुहोस्।
तर तपाईं सिक्न सक्नुहुन्न। त्यसोभए तपाईंको शरीरमा जुपिटर उर्जाको अभाव छ। त्यसोभए ज्योतिषीले तपाईंलाई के सल्लाह दिनेछ, सानो ढु stone्गा लिनुहोस्, र जब तपाईं यो ढु stone्गा पहेंलो पाउनुहुनेछ, यो नीलमणि होइन, यो रूबी होइन ... सिट्रिन पनि एक विकल्प हो यदि तपाईं त्यो प्राप्त गर्नुहुन्न भने। महँगो।
तर तपाईं सिट्रिन लिन सक्नुहुन्छ, यो महँगो छैन। त्यसोभए तपाईं सुन लगाउनुहुन्छ र त्यो फिंगर लगाउनुहुन्छ। यो तपाईं कसरी जुपिटर ऊर्जा आकर्षित गर्न को लागी हुनेछ।
त्यो एक च्यानल हुनेछ। वास्तवमा यी ढु stones्गाहरू यस पृथ्वीमा छन्। किनकि कहिलेकाँही प्रत्येक ग्रहको टुक्राहरू टुक्रिन्छन् र तिनीहरू पृथ्वीमा उड्दछन्।
र जब हामी मूल citrine वा बृहस्पति को लागी ढु get्गा लाग्छ, के हुन्छ के हुन्छ, यो बृहस्पति ऊर्जा को एक च्यानल बन्छ। जतिसक्दो चाँडो तपाईले यो लगाउँनुहुन्छ, तपाई कक्षामा लिन थाल्नुहुन्छ। त्यो हुनेछ।
सामान्यतया, तिनीहरूले हामीलाई असर गर्दछ किनकि उनीहरूसँग अथाह उर्जा छ। त्यसोभए यदि उनीहरूसँग अथाह उर्जा छ र हामीसँग यसको अभाव छ, त्यसो भएन, हामी यहाँ सम्पूर्ण ग्रह ल्याउन सक्दैनौं, तर हामी यस्तो किसिमको उपचार प्राप्त गर्न सक्छौं - पत्थर - किनकि सूर्य रूबी छ, चन्द्रमा मोती हो, मंगल ग्रह मुong्गा हो। ..
यसलाई मुong्गा (रातो कोरल) भनिन्छ। मलाई अंग्रेजी नाम थाहा छैन, तर बुधका लागि यो हरियो पत्थर हो, यो पन्ना हो, र बृहस्पतिको लागि यो सिट्रिन वा अरू कुनै नाम ((पहेंलो नीलमणि र वैकल्पिक रूपमा पुखराज हो)) यो सीधै ममा आउँदैन।
तर शुक्रका लागि यो नीलमणि ((सेतो नीलमणि वा हीरा)) हो। शनिको लागि पनि नीलमणि ((निलो नीलमणि))। शुक्रका लागि यो वास्तवमै हीरा पनि हुन सक्छ।
नीलमणिको सट्टा, यो एक हीरा हो। र शनिको लागि नीलमणि (नीलो नीलमणि) हो। Thats यो कसरी काम गर्दछ।
यो एक च्यानल बन्छ र हाम्रो शरीरमा अभाव भएको उर्जाको प्रकारलाई आकर्षित गर्दछ। र यदि हामी त्यस प्रकारको उर्जा लाई आकर्षित गर्न सक्छौं, यसले काम गर्दछ। त्यसोभए यदि शनि ऊर्जा तपाईंको शरीरमा सकारात्मक रूपमा काम गर्दैछ भने, त्यसोभए तपाईंसँग व्यवसायमा पहुँच छ।
तर यदि यसले काम गरेन भने तपाईलाई गाह्रो समय लाग्नेछ त्यहि कुराको लागि मानिसहरूले सोच्दछन् कोही कोही भावनात्मक हुन्छन्, त्यसैले उनीहरूले चाँदीको र ring्गाको माला लगाउँछन्। यसले तिनीहरूलाई असर गर्दछ किनकि यो चन्द्रमाको लागि एक च्यानल हुन्छ। त्यसैले चन्द्र ऊर्जा सन्तुलित छ।
ज्योतिष सन्तुलन हुन्छ जब तपाईलाई यो गणितीय तरिकाले थाहा हुन्छ ...
खराब ज्योतिषीहरूलाई यो अवधारणा थाहा छैन। तपाईं यस ढु stone्गालाई हेर्नुहोला, तपाईं यो ढु stone्गा बोक्नुहुन्छ, तपाईं यस ढु stone्गालाई बोक्नुहुन्छ, तपाईं ठीक हुनुहुनेछ, तपाईं खराब हुनुहुनेछ - - यो बाटो छैन। तपाईको शरीरमा के अभाव छ भनेर बुझ्न आवश्यक छ।
त्यसोभए तपाईले गर्न सक्नुहुनेछ, त्यसपछि ज्योतिष यो काम गर्ने तरीका हुन सक्छ। आकर्षित गर्न के दोष छ, नहर खोज्नुहोस्। र ज्योतिष कुनै तरिका, सही गणना गर्दा यो लगभग 70० प्रतिशत सही काम गर्दछ।
तर यदि यो सहि गणना गरिएको छैन, यो पूर्ण रूपमा गलत हुन सक्छ। बस आफैलाई सचेत हुन।
तपाइँ ज्योतिषको कसरी पूर्वानुमान गर्नुहुन्छ?
प्रत्यक्षपूर्वानुमानप्रविधीहरूले आकाशमा रहेको ग्रहहरूको हालको स्थिति प्रयोग गर्छन् जस्तो हामी बोल्छौं। ट्रान्जिट कार्यका लागि तपाईंलाई एफेमरिस आवश्यक छ।
सौर्य रिटर्न र शनि रिटर्न आदि।
ग्रहण (सौर र चन्द्र)
नमस्कार! लभेन्डायरमा पुन: स्वागत छ, म मेरो च्यानलमा रमाईलो खोज-खोज उपकरणहरूको यो श्रृंखला जारी राख्छु, त्यसैले यदि तपाईंले पहिलो लेख हराउनुभयो भने मैले ट्यारो कार्डको बारेमा कुरा गरिरहेको थिएँ र कसरी तिनीहरूलाई एक शुरुआतको रूपमा प्रयोग गर्ने किनभने म एक शुरुआती हुँ, आज म हुँ। ज्योतिषको बारेमा कुरा गर्न अति उत्साहित। ज्योतिष त्यस्तो चीज हो जुन मैले आफ्नो जीवनको अधिकांश भागलाई व्यवहार गर्दै थिएँ, शाब्दिक रूपमा जबदेखि म एउटा बच्चा थिएँ, र यो त्यस्तो होइन कि म यसमा वा कुनै पनि कुरामा विशेषज्ञ हुँ। तर म स्टीभेन फोरेस्टको पुस्तक 'इनर स्काई' भन्दा गत वर्ष ज्योतिष र नेचुरल चार्ट पढ्नमा बढी थालें।
मैले जन्मजात चार्ट पढ्ने बारेमा धेरै कुरा सिकें, ज्योतिषविद्याको बारेमा धेरै र मलाई थाहा छ मलाई औसत व्यक्ति भन्दा ज्योतिषको बारेमा धेरै थाहा छ। त्यसैले यो लेख औसत व्यक्ति को लागी हो। यदि तपाईं विशेषज्ञ हुनुहुन्छ भने यसमा हेर्नु आवश्यक पर्दैन।
तर म ज्योतिषलाई तपाईको सूर्य संकेत भन्दा बढी गहिरो वर्णन गर्न चाहन्छु। त्यसोभए रमाईलो लेखको लागि तयार हुनुहोस्! सर्वप्रथम कुरा स्पष्ट गरौं: खगोल विज्ञान आकाशीय पिण्डहरूको वैज्ञानिक अन्वेषण हो, त्यसैले यो cts र अनुसन्धानमा आधारित छ, र ज्योतिष भनेको आकाशीय पिण्डहरूको अर्थ हो, अर्थात् स्वर्गमा के हुन्छ भनेर हामी यसलाई यसरी व्याख्या गर्छौं। यो कविता हो, यो कला हो।
तर यो वास्तवमै राम्रो छ कि सबै चीजको एक अर्थ छ र यो वास्तवमै वैज्ञानिक होइन, तर यो एक कलाको अधिक छ। त्यसोभए जन्मजात चार्ट के हो? तपाईंको ज्योतिषीय जन्मजात चार्ट मूलत: तपाईं जन्मनुभएको समय र स्थानमा आकाशको स्नापशट हो, जहाँ तपाईं जन्मनु भएको संसारमा र सही समय, यो स्वर्गमा रहेको कुराको तस्वीर हो। यो सबै ग्रहहरु को एक प्रकारको नक्शा हो, सूर्य र चन्द्रमा।
त्यसो भए तपाईको जन्मको सहि समयका बारे सटीक हुनु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ किनकि हरेक घण्टा वा दुई मा तपाईको जन्मजात चार्ट परिवर्तन हुन्छ किनकि आकाश सर्छ - होइन, पृथ्वी चल्छ - र यस्तै गतिले यता सार्दछ यदि तपाई पाउनुहुन्छ भने। तपाइँको सही जन्म रेखा चार्ट साइड नोट: यदि तपाइँ चिनियाँ हुनुहुन्छ भने, मलाई थाहा छ कि चिनियाँ संस्कृतिमा अन्धविश्वास छ, फेen शुई र ती सबै सामानहरूको कारण, कहिल्यै पनि कसैलाई तपाइँको मिति / जन्मन दिनुहुन्न। त्यसैले म मेरो वास्तविक जन्मजात चार्ट वा केहि पनि पोष्ट गर्न चाहान्दिन। तर यो किनभने हामी विश्वास गर्दछौं कि एकचोटि कसैले तपाईंको वास्तविक मिति र जन्म समय थाहा पायो भने, उनीहरूलाई तपाईंको भाग्यको बारेमा धेरै थाहा हुन्छ र मानिसहरूले यसलाई तपाईंको विरूद्ध प्रयोग गर्न सक्दछन्।
त्यसैले यो त्यस्तो चीज हो जुन मैले व्यक्तिगत रूपमा गरें - किनकि मेरी आमाले मलाई प्रभावित गर्नुभयो - व्यक्तिगत रूपमा म यसलाई अलि बढी गोप्य राख्न चाहन्छु, त्यसैले तपाईलाई थाहा दिनुहोस्। त्यसोभए तपाईं कसरी आफ्नो जन्मजात चार्ट पढ्नुहुन्छ? त्यहाँ धेरै वेबसाइटहरू छन् जहाँ तपाईं यो जानकारी प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ। क्याफे ज्योतिष एक हो, Astro.com अर्को हो।
र त्यहाँ मोबाइल अनुप्रयोगहरू पनि छन् जुन तपाईले आफ्नो जन्मजात चार्ट जाँच गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। मेरो मनपर्ने ज्योतिष अनुप्रयोग सह-तारा हो। यो एक धेरै आधुनिक र ठाडो छ र तपाइँको जन्म चार्ट र सबै विवरण धेरै सफा तरीकाले रूपरेखा।
त्यसैले यी जाँच गर्नुहोस् - म तिनीहरूलाई तल लिंक गर्दछु। अब मूल त्रिकोणको बारेमा कुरा गरौं जुन तपाईंको सूर्य, चन्द्रमा, र आरोही हो। कहिलेकाँही मानिसहरू आरोहीलाई उनीहरूको 'आरोहण' चिन्हको रूपमा पनि लिन्छन्।
सामान्य रूपमा, यी तपाईको जन्म चार्टमा तीन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण संकेतहरू हुन्। त्यसोभए तपाईले अन्य व्यक्तिहरू देख्न सक्नुहुनेछ जो ज्योतिषमा साँच्चिकै रुचि राख्दछन्, ती सबै ती तीन चिन्हहरू सूचीबद्ध गर्दछन् किनकि ती तीनैवटा मात्र तपाईको सूर्य चिन्ह भन्दा बढि सूचीबद्ध गर्न महत्वपूर्ण छन्। तपाईंको सूर्य चिन्ह मात्र तपाईं जन्म दिनको मा निर्भर गर्दछ तपाईं वर्ष को समय को हो।
म अक्टुबरमा जन्म भएको हुनाले म तुला राशि हुँ। BTW, मसँग यो डायरी छ जहाँ मैले पढेको ज्योतिष पुस्तकबाट धेरै नोटहरू बनाएको थिएँ त्यसैले म यसलाई अब र पछि सन्दर्भ गर्न सक्दछु। सामान्यतया, तपाइँको सूर्य चिन्हले तपाइँको अहंकार, तपाइँको व्यक्तित्व, तपाइँको स्व-छवि प्रतिनिधित्व गर्दछ।
यो तपाईं को हो को मूल हो। तपाईंको चंद्र चिन्ह तपाईंको भावनात्मक आत्म प्रतिनिधित्व गर्दछ। तपाईंको चन्द्रमा तपाईंको संवेदनशीलता, तपाईंको भावना, तपाईंको भावना, तपाईंको मुड, तपाईंको मुटु हो।
कहिलेकाँही मानिसहरूले आफ्नो चन्द्रमा चिन्हलाई तिनीहरूको सूर्य संकेत भन्दा बढी सन्दर्भ गर्दछ किनभने तपाईंको चन्द्रमा तपाईंको भावनात्मक हो र तपाईं त्यो चिन्हको साथ बढी महसुस गर्नुहुन्छ। र तपाइँ जुन चाँहि तपाइँको चन्द्रमामा रहेको चिन्ह हो, जुन तपाइँलाई खुशी पार्ने कुराको संकेत हो र तपाइँले कसरी पूरा भएको महसुस गर्छ। ठिक छ, म एक धनु राशि चन्द्र हो र धनु साहसिक र अन्वेषण हो, नयाँ चीजहरू खोज्दैछ, र म प्रायः त्यससँग पनि सम्बन्धित हुन सक्छु।
तपाईंको आरोही वा 'आरोहण' चिन्ह अनिवार्य रूपमा संसारको लागि तपाईंको मास्क हो। यो अन्य व्यक्तिले तपाईंलाई कसरी बुझ्ने छन्। यसलाई पहिलो प्रभावको रूपमा सोच्नुहोस्।
अन्य व्यक्तिहरूले तपाईंलाई निश्चित तरिकामा देख्न सक्दछन् जब उनीहरूले तपाईलाई पहिलो भेट्छन, र त्यसपछि उनीहरूले तपाईंलाई चिने पछि उनीहरूले महसुस गर्दछन्, 'ओह, तपाईं साँच्चिकै फरक प्रकारको व्यक्ति भएको हुनुहुन्छ।' त्यसोभए तपाईको आरोही तपाई कसरी अन्य जस्तो देखिनुहुन्छ, र तपाईलाई थाहा छ, मेरो उदय चिन्ह मिथुन हो। खैर, यो लेख धेरै लामो बनाउन को लागी, म प्रत्येक चिन्ह, ग्रह, र सबै को अर्थ को विवरण मा जान गइरहेको छैन किनकि त्यहाँ अनलाइन स्रोतहरू छन् कि बारे।
म वास्तवमै तपाईलाई मेरो ब्लग पोष्टमा पढ्नको लागि साधारण नोटहरू सिर्जना गर्न जाँदैछु, केवल द्रुत कुञ्जी शब्दहरू र प्रत्येक वर्ण, ग्रह, वा घरमा नोटहरू। तपाईंको जन्म चार्ट प्राप्त गरेपछि, तपाईं आफ्नो चिन्ह, चन्द्रमा, र बढ्दो चिन्ह लेख्न सक्नुहुन्छ। र त्यसोभए तपाईं मेरो ब्लग पोष्टमा मैले राखेका नोटहरूमा एक नजर लिन सक्नुहुन्छ र प्रत्येक पात्रसँग के मेल खाने भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईंको मूल त्रिकोण चिन्ह बुझ्ने एउटा तरिका यसलाई यसरी वाक्यमा सारांशित गर्नु हो: 'म __ हुँ, आत्माको साथ __, एउटा मुखौटा लगाउनुहोस् __' तपाईंको चिन्हमा निर्भर गर्दै, तपाईं अर्थ र तपाइँको चिन्हको आर्चटाइप र केवल शब्दहरू जेबमा राख्नुहोस्। मेरो लागि उदाहरण को लागी: म एक कलाकारको मास्क लगाएको दार्शनिकको आत्मा भएको कलाकार हुँ, किनकी एक कलाकार भनेको लिब्रा भनेको के हो, दार्शनिक धनु चन्द्रमाको एक आर्केटाइप हो र शिक्षक एक मुख्य शिल्प हो। जुम्ल्याहा लागि। म आशा गर्दछु यस बुझेकोले र म आशा गर्दछु यसले सहयोग पुर्यायो।
त्यसो भए बेसिक्स थियो। गहिरो गोता लगाउनको लागि तयार हुनुहुन्छ? आउनुहोस्! नेटल चार्टको घटक अंशहरूको बारेमा कुरा गरौं। मैले माथि भनें, त्यहाँ १२ स signs्केतहरू छन्, तपाईंले यो भन्दा पहिले सुन्नुभयो - मेष, वृश्चिक, तुला, लिओ - यी सबै मलाई थाहा छ उनीहरू एक पछि अर्को लिदैनन्।
र त्यहाँ दश ग्रहहरू छन्, र 'ग्रहहरू' पछि
के ज्योतिष सही छ?
ज्योतिष नियन्त्रण नियन्त्रण र यसको प्रभावकारिता प्रदर्शन गरेको छैनकुनै वैज्ञानिक मान्यता छैन, र त्यसैले यो छद्मविज्ञानको रूपमा मानिन्छ।
मैले तपाईंलाई सहि बुझे - हो, हो - तपाईंसँग माछाको दाँत छ। (हाँसो) - त्यो खराब छ? - होइन, यो माछा हो - होइन (हाँसो) (शास्त्रीय संगीत चलिरहेको छ) - मेरो नाम रे कोउचर हो, म एक पेशेवर ज्योतिषी हुँ।
And 45 र years० बर्ष बीच। समुहमा होइन तर जहाँ भए पनि म कसैलाई हेर्छु र भन्छु, तपाईं माछा हुनुहुन्छ? र कहिलेकाँही उनीहरूले हो भन्छन्, र कहिलेकाँही उनीहरूले तपाईको व्यवसायलाई भन्दैनन्। (हाँसो) - तपाईको नाम के हो? - Nathaniel.- तपाईं कति अग्लो हुनुहुन्छ? -''10.- मँ तपाईको प्रोफाइल हेर्न सक्छु? ए! ल ल।
तपाईं वृश्चिक हुनुहुन्छ। - के तपाइँ मलाई एक वृश्चिक बनाउँछ? - तीव्रता। - हम्म। - तपाईं कसरी हुनुहुन्छ सर? - नमस्कार, कस्तो छ? तपाईको बाल्यावस्थामा तपाईका बाबुआमासँग के समस्याहरू थिए? - उनीहरूले सँगै बस्न चाहेको हो कि होइन भनेर तपाईले आफ्नो मन कहिल्यै बनाउन सक्नुहुन्न ।- के तपाई धेरै चिन्तित हुनुहुन्छ? - बिल्कुल, प्रायः मेरो छोराको बारेमा ।- त्यस्तै देखिनुहोस्।
ओह, मकरको कानहरू मात्र छेपारो हुन्छ। म कन्याको साथ हिड्दछु।
उसले यसलाई एकदम चाँडो स्वीकार्यो। (हाँसो) मैले पनि हेर्नु पर्दछ कि मान्छेले कसरी व्यवहार गर्छ। कर्नलमा तपाईले के शिक्षित गर्नुभयो? ege? - म कलेज गएको छैन। - तपाईं यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ? - Mm hmm। - तपाईं धेरै भन्न हुनेछ? - धेरै। - तपाइँका हातहरू।
चाहे यो औंलाहरू वा पंजाहरू हो। - म संग के छ? ? - यसलाई यहाँ राख्नुहोस् र त्यसपछि यसलाई फर्काउनुहोस्। र म त्यसलाई त्यसरी नै देख्छु।
तपाईंसँग औंलाहरू छन्, पञ्जा छैन। सुरक्षा गर्नुहोस् - धन्यवाद। - हो, कृपया।
तिमि कति अग्लो छौ? -''१.- तपाईं कलाकार हुनुहुन्छ? - म हुँ। - तपाइँ एक अखबारको लेख लिनुहुन्छ वा कसैले तपाइँलाई प्रुफरीडको लागि केही दिन्छ, तपाईले देख्नु भएको सब भन्दा पहिले यसमा के गलत छ? - हो, मँ भन्छु - तिम्रो आँखाको रंग कस्तो छ? - उह, हेजल, मलाई लाग्छ। - हेजलिश, आह र हामी कुम्भसँगै जान्छौं र त्यसलाई यस्तै छोडिदिन्छ - ठीक छ - मानिसहरूलाई तपाई अनौंठो लाग्छ, अलिक अलिक मात्र? - हो - तपाईंको जन्म कहिले भयो? - १२: -१- १२:1१ मलाई यो कुरा सोध्न दिनुहोस्, के तपाईं सम्बन्धमा हड्डीको कुकुर हुनुहुन्छ? मसँग यो छ, यो मेरो हो - हो। - हो - हो - वृषभ, ठीक छ, धन्यवाद - Okay - नमस्ते - हाई। (हाँसो) ओह, तपाईं फरक हुनुहुन्छ, हैन? (हाँसो) चुनौतीपूर्ण, म शर्त गर्छु तपाईं को हो भन्न सक्नुहुन्न। (हाँसो) यदि तपाईं सर्कल कोर्नुभयो भने, अंडाकारको कति नजिक हुन्छ? ? सर्कलको सट्टा। - यो सायद अंडाकार हुनेछ। - हो।- माछा, धन्यवाद।
आहा, आउनुहोस्।- धन्यबाद ।- अर्को को हो? मलाई तिम्रो हात हेर्न दिनुहोस्
त्यसोभए तपाईं एक स्वतन्त्र विचारक हुनुहुन्छ? - हो। (हाँसो) - म एक ट्रान्सजेंडर व्यक्तिसँग विवाह भएको छु, त्यसैले तपाईंको ट्रान्ज महिला र म साहस र कामको लागि कदर गर्छु। - म यसको मूल्यांकन गर्छु। - यो वास्तवमा तपाईं वास्तवमा कस्तो हुनेछ। - हो।- त्यसैले यो एक विशाल हो यस प्रक्रियासँग सम्बन्धित धेरै परिवर्तनहरू।
त्यहाँ तपाई क्यान्सर हुनुहुन्छ। - ठीक छ, धन्यवाद - ठीक छ, तपाइँको कान, ओह, ठीक छ। खैर, यो एक मकर कान हुन सक्छ।
मकर बिना केही गर्नु हुँदैन। सबै कुरा उपयोगी छ, यो प्रयोग गर्नुपर्दछ र त्यस्तै। मँ मकरलाई कोशिस गर्नेछु।
यो कुम्भ हुन सक्छ, त्यसैले म पछि परिवर्तन गर्न सक्छु, ठीक छ? - धन्यवाद। - तपाईलाई स्वागत छ। - हाई, तपाईको नाम के हो? - अमलिया। - हम्म। (हाँसो) उनी एक चरण अगाडी जान्छन्, तपाईंलाई थाहा छ।
जब तपाईं हुर्कनुभयो, तपाईं के हुन चाहानुहुन्छ? - एक नेता जस्तै वा एक अभिनेत्री वा मजा जस्तै केहि। निश्चित रूपले एक मनोरन्जनकर्ता। - अब के तपाई यसलाई आफ्नो वरिपरि चीजहरु लाई नियन्त्रण गर्न चाहानुहुन्छ? - हो, मलाई यो मेरो तरिका मनपर्दछ। - धेरै जसो सिंहहरू त्यस्तै हुन्छन्। - ए! ल ल। (हाँसो) - म यहाँ छु। (हाँसो) - बाइ। - त्यो रमाईलो छ। (हाँसो) यदि मैले केहि सहि राम्ररी बुझें भने मलाई मतलब छैन। (हाँसो) - के तपाईंलाई थाहा छ महिला र पुरुष वा रातो कपाल भएको व्यक्ति। के तपाईसँग धेरै निएन्डरथल डीएनए छ? (हाँसो) - मैले त्यो सुनेकी छैन, हैन - यो तपाईंको प्राकृतिक रंग हो? - हो र। - हो, ठीक छ।
के म तपाइँका हातहरू देख्न सक्छु - हो के तपाई निएन्डरथल हात जस्तो देखिनुहुन्छ? (हाँसो) - अन्तिम उत्तर मेष हो। - नमस्कार, नमस्कार मेरो जुम्ल्याहा, कस्तो हुनुहुन्छ? - म सन्चै छु, तिमीलाई कस्तो छ? - तपाई कहाँ स्कूल जानु भयो? - म कलेज गएको छैन, म एक श्रीमती र आमा भएँ - त्यो क्रममा? - हो ।- तपाईको लागि राम्रो छ। (हाँसो) - हाम्रो विवाह पछि हाम्रो बच्चा भयो - तपाईं धेरै झगडा गर्नुहुन्छ? - हा, होइन, ऊ मसँग बहस गर्दैन।
म तार्किक छु तर उहाँ दयालु हुनुहुन्छ। - तपाईं तर्कसंगत हुनुहुन्छ? - हो - त्यसो भए तपाईले हरेक तर्क जित्नुभयो? - हो - हो, ठीक छ, तपाईं जुम्ल्याहा हुनुहुन्छ - हाई - त्यसोभए हामीले यहाँ गर्ने सबै कुरा भनेको के तपाईं कुमारी हुनुहुन्छ? (हाँसो) - म आशा गर्छु कि त्यो सजिलो थियो - के म फेरि आफ्नो कानहरू देख्न सक्छु? त्यो मकर राशि गयो, ठीक छ। उहाँसँग संकेतहरू स्विच गर्नुहोस्। - के यो तपाईको अन्तिम उत्तर हो? - मलाई त्यस्तै लाग्छ। - ठीक छ - त्यसैले त्यहाँ तपाईं यो छ।
म पक्कै पनि डराउँछु। (हाँसो) यो खराब छैन। (हाँसो) मलाई थाहा छैन मलाई थाहा छैन, स्पष्ट रूपमा तिनीहरू मध्ये कुनै पनि छैन। (हाँसो) - ठीक छ, म एक नट हुँ, तर मैले त्यो गलत पाएँ। - तपाईं एक राम्रो नट हुनुहुन्छ, तपाईं एक राम्रो नट हुनुहुन्छ।
तपाईं फरक हुनुहुन्छ, तपाईंलाई थाहा छ। हो, उहाँ विगत चार वा पाँच महिनादेखि ग्रहणको बीचमा हुनुहुन्छ, यससँग कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने सम्पूर्ण प्रक्रियासँग संघर्ष गर्दै। ऊ गलत छैन। (हाँसो) - त्यसोभए तपाईंले मलाई गल्ती गर्नुभयो, तर मेरी आमा कुमारी हुनुहुन्छ र हामी धेरै नजिक छौं, त्यसैले तपाईंले उनको उपस्थिति महसुस गर्न सक्नुहुन्छ - यस्तो हुन सक्छ किनभने तपाईं क्यान्सर हुनुहुन्छ र तपाईंसँग चन्द्रमा छ र तपाईंसँग तपाईंको आमा हुनुहुन्छ। तपाईं
तपाईं धेरै न्यानो हुनुहुन्छ र यदि तपाईंले राम्रो महसुस गरिरहनु भएको छैन भने तपाईं म हुनु हुन्न म अलिक खाँचोमा परें र आमालाई कल गर्नुहोस् - र त्यसैले केटीहरू भागिन्। (विलाप) - कुन कुराले तपाईंलाई विश्वास गर्‍यो कि म धनु थियो? - यो यति इमान्दार महसुस भयो, सत्यप्रति प्रतिबद्ध छ - तपाईं र म बीचमा, म वास्तवमै ज्योतिषमा विश्वास गर्दिन - मलाई थाहा छ म गर्छु - वास्तवमा? - यो होइन कि तपाईंले यो विश्वास गर्नुहुन्न, जब तपाईं जन्मनुहुन्छ तपाईं यो सबै चीज निषेध गर्नुहुन्छ र तपाईं जुनसुकै प्रकारको चेतना प्रकट गर्नुहुन्छ। अब तपाईको चेतना भनेको उच्च सडकमा रहनु हो, सँधै इमान्दार र इमान्दार हुनु हो र तपाई झुठो बोल्न सक्नुहुन्न, तपाई (पेन्टिंग) हुनसक्छ त्यस पछि तपाई ज्योतिषविद्याको बारेमा अझ बढी जान्न इच्छुक हुनुहुन्छ किनकि तपाई सिक्न सक्षम हुनुहुन्छ। - ठीक छ, मलाई सहि अनुमान लगाउनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। - यहाँ आउनु भएकोमा तपाईलाई धन्यबाद दिनुहोस्। (हाँसो) - मैले त्यो के गरिन? - मसँग कुंभ छ - मैले तपाईलाई पहिलो पटक कन्या पाए? - होइन, कुंभ - मसँग कुम्भ थियो। - हो - वाह, मलाई के गलत थियो? (हाँसो) मलाई कसरी थाहा भएन? - म एक मेष हुँ र तपाईंले मलाई वृषभ हुँ भनेर अनुमान गर्नुभयो। - हो, तपाईं वृषभ हुनुहुन्छ ।- म अप्रिल १ th मा जन्मेको थिएँ, त्यसैले म ढोकामा थिएँ, त्यसैले जब यो नजिक छ भने मेषबाट वृषभ थ्रेसोल्ड हो। ।
तपाईंसँग वृषभ गुणका साथै मेष गुणहरू छन् र जुन तपाईंको समस्यामा परिणत हुन्छ। मेष जान चाहन्छ र एक वृष भन्छन् कि त्यो हो? राम्रोसँग यसको मूल्यवान छ, के मैले वास्तवमै त्यस्तै गर्नुपर्दछ र? त्यसोभए तपाईले यी सबै कुराहरुको सन्तुलन राख्नु पर्छ - धेरै धेरै धन्यबाद - स्वागत छ, ठीक छ। मैले तपाईंलाई सहि बुझे - हो, हो - मसँग माछा दाँत छ। (हाँसो) - त्यो खराब छ? - होइन, तिनीहरू माछा हो - होइन (हाँसो) - तपाईं के अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ? - म एक फिल्म विद्यार्थी हुँ - तपाईं एक फिल्म विद्यार्थी हो त तपाईं चित्र संग मान्छे संग सम्पर्कमा रहन चाहानुहुन्छ? - हो। - सहि।
र तिम्रो हजुरआमा वास्तवमै तपाईंको जीवनमा एकदम महत्त्वपूर्ण थियो? - हो।- अत्यन्त महत्त्वपूर्ण, उनले तपाईको ख्याल राखी।- हो।- तपाईले उसलाई चाहानु भएको कुरा पाउनु भयो किनभने यो आमा र बुबाबाट आएको थिएन। - हो। (हाँसो) - नमस्ते, कन्या कुरा यो हो कि तपाईंसँग विश्व प्रस्ताव गर्न केहि छ, र यसको केही अंश लेखनमा हुनेछ ।- म एक लेखक हुँ, मतलब म पनि एक सम्पादक हुँ, म एक सम्पादक थिएँ धेरै समय सम्म - त्यसोभए तपाईले लेख्न छोड्नु हुँदैन नरोकिनुहोस् - धन्यवाद, तपाईको जीवनसाथीलाई बताउनुहोस् मैले उनीहरूलाई बढी शक्ति बताएँ - ओह, म्याडलिन बताउनेछु, ठीक छ, धन्यवाद - तपाईले सही अनुमान लगाउनुभएको छ - तपाईको जन्मदिन कुन हो? - डिसेम्बर २th - त्यसोभए तपाईं यस मार्फत पहिल्यै भइसक्नुभयो, म यसलाई नजिकको मृत्यु अनुभव भन्न सक्दिन।
तपाईंले किनारमा झन्डै तीन बर्ष पहिले झुण्ड्याउनु भयो, वा सायद चार बर्ष। तपाईंले सही काम गर्नुभयो, तपाईंले सही काम गर्नुपर्‍यो - मलाई लाग्छ। (भयानक) - तपाईंले मलाई सहि गर्नुभयो - मैले तपाईंलाई ठीक भनेको छु? - Mm hmm।
के तपाईंलाई १less बर्ष नहुँदासम्म बेकम्मा वा मूल्यको कुनै समस्या भएन - हो - यो कलेजमा थियो? कसैमा जसले तपाईंलाई वास्तवमै कत्ति अचम्मको कुरा बतायो - हो - हो, यदि मलाई थाहा छ म यो बेला के हो र यति बढि, म वास्तवमै यसलाई बाहिर निकाल्न सक्दछु, तर तपाईंलाई थाहा छ सूर्य संकेत थोरै भारी छ। - म मेरो जैविक आमालाई भेटें जब म १ was थियो - अह - हे भगवान, हो - र उनले भनिन् कि म तिमीलाई माया गर्छु - हो। (हाँसो) - म अहिले स्तब्ध छु - त्यसोभए तपाईं ज्योतिषविद्या (गनगन गर्ने) बारे के सोच्दै हुनुहुन्छ? - मैले राशिचक्र साइन आफैंमा अलि धेरै विस्तृत र अस्पष्ट फेला पारेको छु र अरु सबैलाई लागु गर्न सक्छु। - तपाइँ कहिले जन्मेको थाहा छ? - मलाई थाहा छैन। - हैन, केही पनि छैन। - होइन, मलाई कुनै विचार छैन।
म मेरो जन्मको समयको बारेमा बढी चिन्तित थिएँ जब म जन्मिएको थिएँ। - तपाईंसँग समय बर्बाद गर्न कुनै अन्य तरीका छ? - समय खेर फाल्नु? - पक्कै पनि, मेरो मतलब, मृत्युको बारेमा सोच्दै। - म यसको बारेमा धेरै सोच्दिन। - ओह, तपाईं त्यसो गर्नुहुन्न? - होइन - ठीक छ, त्यसोभए तपाईं जुम्ल्याहा हुनुहुन्छ, मैले तपाईलाई समस्याको एक छेउबाट शुरू गरेको देखें। (हाँसो) - तपाईं मसँग हुनुहुन्छ, तपाईं मसँग हुनुहुन्छ - त्यस्तै रहनुहोस् - उहाँ चुम्बक हुनुहुन्छ। (हाँसो) त्यसोभए तपाईंको जन्म कहिले भएको थियो - उह, :15:१:15 - :15:१:15 बिहान वृषभ, सूर्य भर्खरै उदाएको छ (गनगन)। .- हो, म करीव एक बर्ष पहिले स्कूल जान थाल्छु, तर तर म मर्नुभएन भने सम्म हामीसँग केहि नराम्रो कुराहरु थिए त्यसैले मैले छोडिदिएँ। - को उत्तीर्ण भयो? - मेरो छोरा। - तपाईंको छोरा - हो।
तपाईंसँग बाँच्नको लागि अझै कारण छ। तपाईंको छोरा अझै तपाईंको साथमा छ, ऊ अझै तपाईंलाई प्रोत्साहित गर्दैछ। तपाईं अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ र उसले पक्कै यसको कदर गर्दछ।
धन्यबाद - स्वागत छ - त्यसोभए तपाईं वृश्चिक हुनुहुन्छ? - त्यो म हो - मानिसहरू वू ला ला जान्छन्। (हाँसो) - मलाई लाग्छ वृश्चिकको बारे धेरै व्यक्तिको धारणा साँच्चै तीव्र र अधिक रहस्यमय छ। म आफूलाई गहिरो रूपमा देख्न सक्छु, पूर्ण रूपमा रहस्यमय होइन, तर म कल्पना गर्न सक्दछु यो कसरी एक हदसम्म हुन सक्छ ।- वृश्चिकसँगको कुरा, तपाईंलाई यो साँच्चिकै मनपर्दछ भन्ने तथ्यको बाबजुद पनि तपाईंसँग सम्बन्ध हुनुपर्दछ।- के मसँग छ? to? ? (हाँसो) मँ गर्न सक्दिन, यो मेरो काम मात्र हुन सक्दैन। (हाँसो) - हो, यो धेरै रमाईलो थियो।
धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। (ताली)
के ज्योतिष धेरै लोकप्रिय हुँदै गइरहेको छ?
ज्योतिषभर्खरका वर्षहरूमा बूम देखिएको छ, र अनुप्रयोगहरूले यसलाई सजिलो बनाउँदछ पहिले पाम पढ्नको लागि,कुंडली, र तपाइँका संकेतहरू जाँच गर्नुहोस्। को लागी राजस्वज्योतिषअनुप्रयोगहरू बढेको छमाथीलाईमाथी२०१ 2019 मा million० करोड२२ २०२०।
नमस्कार, २०२१ ज्योतिष कार्यक्रममा स्वागत छ। म २०२१ मा दुई श्रृंखला गरिरहेछु। म तपाईंको राशि चिन्ह प्रयोग गर्दछु ...
चाहे तपाई यसलाई कला वा विज्ञान भन्नु हो, ज्योतिष भारत मा धेरै सामान्य छ। यो कुनै आश्चर्यको रूपमा आउनु पर्छ; हामीमध्ये धेरै अन्धविश्वासी हुन्छौं र ज्योतिषको अनुसरण गर्दछौं। अचम्मको कुरा के छ भने वैज्ञानिक र तर्कसंगत मानिने युवा भारतीयहरू ज्योतिषतिर लागेका छन्। २ 23 बर्षे अनीश चौधरीले द इंडियन एक्सप्रेसलाई अन्तर्वार्तामा भने कि उनको राशि चिन्हले उनलाई कामको दबाबमा पर्ने स्पष्ट पार्छ।
र उही दिनमा, उसले ग्राहकको स to्कटको कारण राती अबेरसम्म काम गर्नुपर्‍यो। उनको जन्मकुण्डल जाँच गर्नुका साथै उनी आज टकको लोकप्रिय ज्योतिष कार्यक्रममा पनि भाग लिए। अनीश ज्योतिषमा परिवर्तन गर्ने एक मात्र युवा वयस्क होइन।
संयुक्त राज्य अमेरिकाका युवा वयस्कहरूको सर्वेक्षण २०१ survey मा पत्ता लगाइयो कि len%% सहस्राब्दीहरू ज्योतिषशास्त्रमा विश्वास गर्छन् र% 65% नियमित रूपमा उनीहरूको राशिफल जाँच गर्दछन्। भारतमा होईन, तर संयुक्त राज्य अमेरिकामा। दुर्भाग्यवस, हामीले भारतमा कुनै डाटा प्राप्त गरेका छैनौं, त्यसैले हामी हाम्रो विश्लेषणका लागि गुणात्मक अन्तरदृष्टिमा भर पर्छौं।
ज्योतिष फलफूलको अनलाइन व्यवसाय भएको छ। अमेरिकीहरू ज्योतिषविद्यामा हरेक वर्ष २ बिलियन डलर खर्च गर्छन्। धेरै लगानीकर्ताहरूले ज्योतिष सम्बन्धी कम्पनीहरूमा लगानी गर्छन्।
युवा वयस्कहरूले ज्योतिषविद्या प्रयोग गर्छन् उनीहरूको जीवनका केहि प्रश्नहरूको उत्तर खोज्न। के म सरकार संग काम पाउन सक्छु? मेरो सुरुको भाग्य के हुनेछ? मेरो प्रेम जीवनको विकास कसरी भयो? के म मेरो परीक्षामा राम्रो गर्न सक्छु? सबै इमानदारी मा, म यो मेरो वरिपरि हेरिरहेको छु। मेरो उमेर को धेरै ज्योतिष अनुप्रयोग र सेवाहरु मा निर्भर गर्दछ।
त्यसोभए किन किशोर किशोरीहरूले ज्योतिष पछ्याइरहेका छन्? यसका लागि तीन कारणहरू छन्। पहिलो कारण तनाव हो, र अमेरिकन साइकोलजी एसोसिएसनको एक सर्वेक्षण अनुसार, हजारौं वर्ष २०१ of मा सबैभन्दा तनावग्रस्त पिढी भएको छ। हजारौंलाई को हो भनेर नचिन्नेहरूका लागि।
यी १ 198 1१ र १ 1996 1996 between बीचमा जन्मिएका व्यक्ति हुन्। त्यो रांचीको एउटा सर्वेक्षणमा थियो। फेला पारे कि १ मध्ये १ युवा वयस्कमा चिन्ता, उदासीनता र तनावका लक्षणहरू थिए।
युवा वयस्कहरू तिनीहरूको काम, शिक्षाविद र सम्बन्धबाट तनावग्रस्त हुन्छन्। यसले नकरात्मक नतिजा लिन सक्छ। भारतमा युवा वयस्कहरूको प्रमुख हत्यारा आत्महत्यामा जोड दिईन्छ कि धेरैले ज्योतिषबाट राहत लिन सक्छन्।
यो नोएडामा बस्ने ज्योत्सना शर्माको कथामा झल्किन्छ। उनी COVID-19 को संकटको कारण आफ्नो जागिरको बारेमा चिन्तित थिइन्। हुनसक्छ त्यहि कारणले गर्दा मानिसहरूले ज्योतिषीहरूलाई खोज्दैनन् जब उनीहरूको जीवन मिल्दोजुल्दो छ।
दोस्रो कारण असुरक्षा हो। अनिश्चितताको अर्थ हामी हाम्रो भविष्यको बारेमा कत्ति अनिश्चित छौं। हामी यसलाई ज्योत्सनाको उदाहरणबाट बुझ्न सक्छौं।
उनी तनावग्रस्त थिइन किनभने उनी आफ्नो जागिर गुमाउने बारेमा निश्चित थिइनन्। मनोविज्ञान सुझाव दिन्छ कि व्यक्ति आफ्नो भविष्यको बारेमा जिज्ञासु हुन्छन्। हामी भविष्यमा के हुन्छ जान्न चाहन्छौं।
कहिले र कसरी हाम्रो भविष्यको विकास हुन्छ? हामीले ज्योतिषलाई प्रेम गर्नुको कारण यो हो कि भविष्यको भविष्यवाणी गर्ने हाम्रो आफ्नै हो। १ 18 बर्षकी श्वेता जैन भन्छिन् कि उनी एक दिनको समयमा के हुने होला भनेर पत्ता लगाउन उनको कुंडली पढ्छिन्। किन किशोर किशोरीहरूले ज्योतिष पछ्याउँछन्? किनकि हाम्रो विश्व झनझन असुरक्षित हुँदै गइरहेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सर्वेक्षण अनुसार 38 38% युवाहरू महामारीको कारण आफ्नो भविष्यको बारेमा अनिश्चित छन्।
तेस्रो कारण ईन्टरनेट हो। धेरै वर्ष अघि तपाईले एउटा पत्रिका मार्फत पातलो पत्ता लगाउनुपर्दथ्यो वा ज्योतिषीसँग परामर्श लिनु भएको थियो तपाईको कुंडलीहरू जान्नका लागि। तर इन्टरनेट र सोशल मिडिया यो परिवर्तन भएको छ।
एपी पी स्टोरमा २०० भन्दा बढी ज्योतिष अनुप्रयोगहरू छन्, एस्ट्रोबड्डी अनुप्रयोगका सह-संस्थापकले महामारीको समयमा प्रयोगकर्ताको संख्यामा २ 25% वृद्धि भएको दावी गरे। र यो प्रवृत्ति डिमोनेटाइजेशन पछि शुरू भयो। इन्टरनेट र ज्योतिष बीचको बीचको सम्बन्ध जो मेम् संस्कृतिमा पनि परिलक्षित हुन्छ।
ज्योतिष हाम्रो जीवनको अनिश्चितता र तनावबाट मुक्त हुने एक मात्र तरीका छैन। ज्योतिषविद्याका धेरै प्रकारहरू छन्: ट्यारो कार्ड, क्रिस्टल बलहरू, हस्तरेखा विज्ञान, इत्यादि पनि युवा वयस्कहरूमा किन वयस्कहरूले ज्योतिषलाई पछ्याउँछन् भनेर लोकप्रिय चर्चाहरू हुँदैछन्।
यो तनाव, असुरक्षा र इन्टरनेटको कारणले हो। अब हामी यो बुझ्न कोसिस गरौं कि कसरी ज्योतिषले यसको समस्याहरू समाधान गर्दछ। यो अनिश्चितता हटाउँछ।
हामीले यसबारे छलफल गर्‍यौं। सुख र अनियमितता हाम्रो जीवनमा एक महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ के तपाइँ सोच्नुहुन्छ के COVID-19 रातारात विश्व परिवर्तन हुनेछ? हामीलाई यो अनियमितता मन पर्दैन। हामी वरिपरिको संसारको अनिश्चितता मन पराउँदैनौं।
यसैले हामी ज्योतिषलाई पछ्याउँदछौं किनकि यो रन्डमनेस फाइनान्स २००lim लाई हटाउन सक्छ स the्कटको समयमा कर्पोरेट उद्योगमा काम गर्ने धेरैले आफ्नो बचत गुमाए। तिनीहरू मध्ये धेरैले एक ज्योतिषीसँग परामर्श गरे र प्रश्नहरू सोधे, 'मेरो जीवनमा के भइरहेको छ? केहि मतलब छैन। धेरै जसो कठिनाईहरू हामी पार गर्छौं दुर्घटनात्मक हुन्।
तपाईंसँग बलियो कारण छैन। तर हामी अनियमितता मन पराउँदैनौं। त्यसोभए यदि तपाईंले कुनै ज्योतिषीसँग सल्लाह लिनुभयो भने, उहाँले तपाईंको कुंडली राम्रोसँग पढ्नुहुन्न भनेर तपाईंलाई सहज पार्छ।
यो शान्त र अनिश्चितता हटाउनको लागि उत्तम हो। ज्योतिष शास्त्रले हामीलाई दोष अरू केहिमा लगाउने अवसर दिन्छ। अनुसन्धानले देखाएको छ कि तपाईको काम गुमाउनु, स्टक मार्केटको संकटको सामना गर्नुपर्दा, वा ब्रेकअप भएको खण्डमा तपाईलाई राम्रो महसुस हुन्छ जब ज्योतिषीले तपाईलाई भन्छन कि यी सबै ताराहरू र ग्रहहरूको मिसिनमेन्टको कारण हो।
तेस्रो, ज्योतिषले हामीलाई विश्वास दिन्छ। ज्योतिष त्यस्तो उत्तम मित्र जस्तै हो जसले तपाईंलाई प्रोत्साहित गर्छ। “मोहक, चिन्ता नगर।
यो केवल कठिनाइको अवधि हो। भविष्य तपाईंको लागि सुन्दर छ। '(सकारात्मक पुष्टि) तपाईले कति जना हेरी पॉटर देख्नुभएको छ? फिल्ममा एक दृश्य छ जहाँ ह्यारीले रोनलाई क्विडिच खेल अघि 'भाग्यशाली औषधि' दिन्छन्।
जबकि खेल अघि रोन एकदम असुरक्षित थियो। औषधि पिइसकेपछि, उनले आत्मविश्वास महसुस गरे र खेलमा राम्रो प्रदर्शन गरे पछि उनले पत्ता लगाए कि ह्यारीले उनलाई कहिल्यै भाग्यशाली औषधि दिन सकेनन् र यो सबै उसको टाउकोमा थियो।
चाखलाग्दो अनुसन्धान छ एक परीक्षा अघि, केहि विद्यार्थीहरूलाई सकारात्मक राशिफल देखाइएको थियो भने अरूलाई नकारात्मक राशिफल देखाइएको थियो। यो भेटियो कि विद्यार्थीहरूले सकारात्मक परीक्षाफल देखाए जुन उनीहरूको परीक्षामा राम्रो प्रदर्शन गर्थे। वास्तविकतामा तपाईको जीवनमा केहि परिवर्तन हुँदैन।
तपाईलाई भनेको मात्र भइरहेको छ। तपाईंको अगाडि ठूलो भविष्य छ। उनीहरू भन्छन्: हामीले यो ज्योतानाको मामलामा देख्यौं।
उनले भनिन कि सुरुमा उनी ज्योतिषमा विश्वास गर्दिनन्, तर उनको सकारात्मक कुंडली सुने पछि उनी ठीकै महसुस गरीन्। यो धेरै युवाहरूमा हुन सक्छ। हामी हाम्रो तर्कमा वैज्ञानिक र तर्कसंगत छौं।
त्यसकारण हामी ज्योतिषमा विश्वास गर्दैनौं, तर हामी आफ्नो जन्मजात मानसिकताका कारण सकारात्मक कुंडली पनि पढ्न चाहन्छौं। ज्योतिष एप्सले हामी जस्तो किशोर-किशोरीहरूलाई अपील गर्नको लागि मार्केटिंग रणनीति परिवर्तन गर्दैछ। उदाहरणका लागि, को-स्टार, सबैभन्दा लोकप्रिय ज्योतिष अनुप्रयोग मध्ये एक, दावी गर्छ कि यसले नासा द्वारा प्रदान गरिएको डाटालाई चाखलाग्दो प्रयोग गर्दछ किनभने यसले विज्ञानमा विश्वास गर्ने र नासालाई सम्मानित संस्थान मान्ने मानिसहरूलाई अपील गर्दछ।
तसर्थ, तिनीहरूले ज्योतिष पढ्न मन पर्दैन। हामीले छलफल गरेझैं, ज्योतिषको प्लेसबो प्रभावले परीक्षा परिणाम सुधार गर्न सक्दछ। तर यसको धेरै नकारात्मक परिणाम पनि छन्।
धेरै मानिसहरू ज्योतिष र यसको कुंडलीहरूमा ग्रस्त हुन्छन्। डा। रिचार्ड एन्ड्र्यू, एक क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक, भने कोही कोही दिनको hor-6 पटक आफ्नो कुंडलीको सन्दर्भमा व्याकुल हुन सक्छन्।
अनिताले स्वीकार गरी कि यदि उनी सकारात्मक कुंडली भेटिएन भने उनी बढी उदास हुन्छिन्। यसले अर्को समस्या पनि निम्त्याउँन सक्छ: यसको मतलब यो हो कि मानिसहरूले विश्वास गर्न थाले कि उनीहरूको जीवन बाह्य कारकहरूमा निर्भर गर्दछ र उनीहरूमा थोरै नियन्त्रण हुन्छ। यो मानसिकता खतरनाक हुन सक्छ।
ज्योतिषमा विश्वास गर्नु खराब चीज होइन। हामीले ज्योतिषको सकारात्मक पक्षहरूको बारेमा कुरा गरेका छौं - यसले तनाव कम गर्न र तपाईंलाई बढी विश्वस्त तुल्याउन सक्छ। तर अधिक ज्योतिष मा निर्भर खतरनाक साबित गर्न सक्छन्।
समाधान के हो? तपाईं तीनवटा कुरा विचार गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले यो तथ्यलाई स्वीकार्नुपर्दछ कि हामी हाम्रो जीवनको १००% नियन्त्रणमा छैनौं। र हामी हाम्रो भविष्यको कहिले पनि भविष्यवाणी गर्न सक्दैनौं।
ज्योतिष तनाव र उदासीनता विरूद्ध लड्न सक्दछ, तर यो एक मात्र तरीका छैन। तपाईं उपचार खोज्न सक्नुहुन्छ। मानसिक स्वास्थ्य एक व्यापक क्षेत्र हो र पेशेवरहरूले तपाईंलाई तपाईंको कामसँग सम्बन्धित तपाईंको समस्याहरू समाधान गर्न मद्दत गर्न सक्दछ, जीवनलाई प्रेम गर्दछ, र अन्य चीजहरू जसले तपाईंलाई उदास बनाउँछ।
मैले वर्णनमा केहि लिंकहरू समावेश गरेको छु जुन तपाईं सन्दर्भ गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो जीवनमा तनावको मुख्य कारण हाम्रो कार्य जीवन हो। धेरै ग्राहकहरू ज्योतिषीहरूलाई उनीहरूको क्यारियरको बारेमा प्रश्नहरू सोध्छन्।
कुनै ज्योतिषीसँग सल्लाह गर्नुको सट्टा तपाई कुनै सल्लाहकार वा सल्लाहकारलाई खोज्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईंलाई सहयोग गर्न सक्दछ। राम्रो कार्य जीवन संतुलनको साथ, हामी यी समस्याहरू समाधान गर्न सक्दछौं। आशा छ कि हामी केवल ज्योतिषको सकारात्मक पक्षहरू खोजिरहेका छौं - आत्मविश्वास र डिप्रेसन जस्ता नकारात्मक पक्षहरू होइन।
के ज्योतिषले तपाईंको मृत्युको भविष्यवाणी गर्न सक्छ?
मृत्युछलाईभित्र दुर्लभ कुराज्योतिष, जुन गर्न धेरै गाह्रो छभविष्यवाणी। माज्योतिष, त्यहाँ कुनै छोटो-कट मार्ग छैनभविष्यवाणीकसैकोमृत्यु। त्यहाँ धेरै कारकहरू र संयोजनहरू छन् जुन परिणाम हुन सक्छमृत्यु। साथै,कोठिक समयमृत्युहुन सक्दैनभविष्यवाणीसहि
के कुंडलीले भविष्यको भविष्यवाणी गर्न सक्दछ?
धेरै पटक हामी हाम्रो राशिफलको आधारमा हाम्रो राशिफलको आधारमा पढ्छौंभविष्यवाणीराशिफलको आधारमा बनाइएको होइन राम्रो र फलदायीभविष्यवाणी गर्न सक्छन्केवल एक बनाइएको छ जब एक बाट तपाईंको अन्य ग्रहहरु को स्थिति अध्ययनकुंडलीवा जन्म चार्ट। सहीको लागिभविष्यवाणीउनीहरूलाई चाहिन्छकुंडली।9 २०१।
कुन राशि चिन्हले भविष्यको भविष्यवाणी गर्न सक्छ?
मेष (मार्च २१ - अप्रिल १))
मेष राशिको उनीहरूसँग प्रवृत्ति-ह्वास्प्रेसर हुन सक्ने अर्को के हुन्छ भनेर जान्नको लागि मानसिक क्षमता छ।१ 20 २०२०।
के ज्योतिष क्यारियरको लागि सही हो?
सोध्नुहोस्ज्योतिषीर, अचम्म मा, उत्तर एक शानदार हो हो।ज्योतिषमहत्त्वपूर्ण बनाउन उपयोगी उपकरण हुन सक्छक्यारियरर वित्तीय निर्णयहरू, लास भेगासमा स्पिरिट एण्ड स्पार्कको अभ्यास गर्ने भर्जिनिया पाकिओकोले भने।2019१ २०१ 2019
के ज्योतिष भविष्यवाणी गलत हुन सक्छ?
किनभविष्यवाणी गर्नुहोस्जानुहोस्गलतसही जन्म चार्टको बावजुद।ज्योतिष भविष्यवाणीपूर्ण रूपमा सही जानकारीमा आधारित छन्। एक ग्रह को डिग्री मा एक सानो अंतर पनिसक्छफरक फरक परिणामकुंडलीएक व्यक्ति को पढाई। जहाँसम्म, जब एक सही विवरण प्रदान गर्दछ, त्यहाँ समयहरू छन्,भविष्यवाणी गर्न सक्छन्जाऊगलत...बीस २०१।
किन ज्योतिष अहिले यति लोकप्रिय छ?
त्यहाँ धेरै ध्यान केन्द्रित छज्योतिषभविष्यमा एक विन्डो को रूप मा, तर यो पनि एक वर्तमान प्रणालीको लागि एक नक्कल प्रणाली हो जसमा हाम्रो भविष्य बाँच्दछ र बढ्छ। यस वर्ष शनि र यूरेनस एक अर्कासँग स्क्वायर गर्दै छन्।पन्ध्र २०२१
ज्योतिष,त्यसो भएन्यू एजर्सको क्षेत्र अझै पनि still० को दशकमा अडीरहेको रूपमा लामो रूपमा देखिएको, केहि समय भएको छ। बढ्दो संख्यामा मानिसहरू, विशेष गरी सहस्राब्दी महिलाहरूज्योतिषउनीहरूलाई सम्बन्ध अनुकूलता न्याय गर्न, मित्रताको गतिशीलता बुझ्न र जीवन निर्णय लिन सहयोग गर्न।19 २०१।
त्यहाँ सबै संकेतहरूको लागि कुनै नि: शुल्क दैनिक राशिफलहरू छन्?
आजको नि: शुल्क दैनिक राशिफल - एस्ट्रोलोजी.कट सबै संकेतहरूका लागि दैनिक राशिफल। ज्योतिष डट कमले एकल र जोडी, समलिay्गी वा सिधा, वित्त, यात्रा, क्यारियर, आमाहरू, किशोर, बिरालाहरू र कुकुरहरूको लागि प्रेम सहित विभिन्न रुचिमा नि: शुल्क दैनिक, साप्ताहिक, मासिक र वार्षिक राशिफलको 30० भन्दा बढी संयोजनहरू प्रदान गर्दछ। ज्योतिष। Com ज्योतिष अहिले
अगाडि महिनाको लागि के राशिफलहरू छन्?
मेरो २०२१ वार्षिक राशिफल पूर्ण राउन्ड-अप हो, र २०२१ कुंडली अवलोकन अर्को बर्षको राशिफल सारांश हुन्। हाम्रो विशेष मासिक राशिफल अगाडि महिनाको लागि मार्गदर्शक हो। तीनिहरूले हालको महिनाको सिंहावलोकन, साथै पूर्वानुमानमा मुख्य तारीखहरूको मुख्य विशेषताहरू, प्रत्येक राशि चिन्हको लागि समावेश गर्दछ।
यो हप्ता ज्योतिषमा के हेर्ने?
यस हप्ता ज्योतिष शास्त्रमा यस हप्ताको ताराहरू के भण्डारमा छन् – एनीले वर्तमान ग्रहको उर्जाहरूमा एक नजर राख्दछ, स ,्केतमा ग्रहहरू, शून्य-कोर्स मून चक्र, ग्रहका पक्षहरू, प्रेम र रोमान्स प्रवृत्तिहरू, पूर्वग्रहणीय ग्रहहरू, चंद्र चरणहरू, र दिनहुँ ट्रेन्डहरू।